About Love | Nepal Hypnosis Clinic and Training
An article about love written by Psychologist Archana Bibhor in Nepali language.
- अर्चना विभोर, मनोविद्
प्रेम अद्भूत शक्ति हो । हामी सबै प्रेमका पुजारी हौँ । संसार प्रेममय छ । प्रेममय भएकै कारण संसार अडिएको छ । सबै मानिस जानी-नजानी प्रेम गरिरहेका हुन्छन् । माया, ममता, करुणा, स्नेह, सद्भाव, भक्ति, सत्कार, स्वाभिमान, अनुशासन आदि सबै प्रेमका स्वरूप हुन् । प्रत्येक पल मानिसले प्रेमको कुनै न कुनै स्वरूप धारण गरेकै हुन्छ । यही शक्तिको कारण मानवजीवनको औचित्य रहन्छ ।
परिभाषाहीन प्रेमको शक्ति पनि सीमाहीन छ, त्यसैले होला मानिसले प्रेमको सही परिभाषासमेत बनाउन सक्दैन । केवल महसुस र अनुभव गर्नसक्छ, अनि सक्छ आ-आफ्नै शैलीमा व्यक्त गर्न र बयान गर्न । यसरी आफ्नै शैलीमा व्यक्त र बयान गर्दागर्दै कतिखेर प्रेमले घृणाको स्वरूप लिन्छ, मानिसले पत्तै पाउँदैन । अनि, सुरु हुन्छ उसको दर्दनाक कथा ।
"मैले जति त्यसलाई माया कसैले गर्दैन, तर त्यसले मेरो प्रेमको महत्त्व बुझ्नै सकेन ।" यो धेरै मानिसले प्रयोग गर्ने अत्यन्तै सामान्य वाक्य हो । हो, सबै मानिसले आफ्नो प्रियजनलाई असाध्यै प्रेम गर्छन् । उनीहरूको नजरमा त्यति प्रेम अरू कसैले गर्नै सक्दैन । तर, सबैको प्रेम गर्ने शैली जस्तै, प्रेम ग्रहण गर्ने शैली पनि भिन्न हुन सक्छ । यो कुरा मानिसले विचार नै गर्दैन या भनौँ विचार गर्नै चाहँदैन, जसका कारण उसको प्रेमले पीडालाई जन्म दिन्छ ।
"आफ्नै शैलीमा प्रेम गर्दा पीडा जन्मिन्छ भने के हो त प्रेम गर्ने वास्तविक शैली ?" एकजना साथीको प्रश्नै तेर्सियो मतिर । मैले बुझेसम्म त प्रेमको कुनै शैली हुँदैन । शैली हुँदो हो त प्रेम विज्ञान, राजनीति, व्यापार या यस्तै केही हुनेथ्यो, प्रेम रहने थिएन । शैली छैन, यसैकारण प्रेम र्सवश्रेष्ठ छ, शक्तिशाली छ ।
हरेक मानिसको प्रकृति फरक हुन्छ । मनोवृत्ति फरक हुन्छ । जीवनशैली अनि कार्यशैली पनि फरक हुन्छ । यी सबै भिन्नतालाई स्वीकार गरेर प्रेम गर्नु नै वास्तविक प्रेम हो, जुन मानिस जस्तो प्रवृत्तिको छ, उसलाई त्यस्तै स्वरूपमा स्वीकार गर्नर्ुपर्दछ । त्यो स्वीकृति नै प्रेमको वास्तविक स्वरूप हो ।यदि कसैलाई आफ्नो नजिक तान्न सकिन्छ भने त्यो हो प्रेमले । कसैको कुनै पनि व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने प्रेमले मात्र सकिन्छ ।
सबैको भिन्नभिन्न कार्यशैली हुने हुँदा उक्त कार्यमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग तालमेल नमिल्न सक्छ । कार्यसम्पन्न गर्न केही बानी-व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीलाई सबैभन्दा गाह्रो लाग्ने काम भनेको आफ्नो बानी परिवर्तन गर्ने काम हो । त्यसैले हामी आफूलाई गाह्रो लाग्ने काम हामीसँग सम्बन्धित व्यक्तिले गरोस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यो नै हाम्रो ठूलो भूल हुन जान्छ । हामीलाई जस्तै दोस्रो व्यक्तिलाई पनि उसको व्यवहार परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ त्यसको असर सम्बन्धमा केही देखिन थालिहाल्छ । दोस्रो व्यक्तिबाट धेरै अपेक्षा गर्ने र आफ्ना कमजोरीहरू नदेख्ने क्रिया बढ्दै गएमा सम्बन्ध अझै धेरै बिग्रिनसक्छ, जहाँ प्रेमले कुनै महत्त्व राख्दैन । जिन्दगी नरकजस्तै बन्न सक्छ ।
त्यसैले, प्रेमको बीचमा अन्य कुनै आवश्यकतालाई स्थान दिनुहुँदैन । प्रेम केवल प्रेम हो । निश्चल मनले प्रेमको अनुभव गर्नुपर्छ । प्रेमको सही अनुभव गर्न सके अन्य सानातिना झमेला आफैँ सुल्झिएर जान्छन् । अन्य कुनै पनि भावना प्रेमको परिपूरक हुनै सक्दैनन् । प्रेम एकमात्र त्यस्तो शक्ति हो, जसले मानिसको जिन्दगी सफल बनाउन सहयोग गर्नसक्छ ।
हामीले हाम्रो प्रेम अझ प्रभावशाली बनाउन सक्छौँ । बिहान उठ्नासाथ आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिको असल गुणहरू सम्झिने र उसप्रति कृतज्ञ हुने गरेमा हाम्रो प्रेमको शक्ति अझै बढ्छ, जुन शक्तिले हाम्रो जीवनमा खुसीको बहार ल्याइदिन्छ । त्यही खुसीको सुगन्धले हाम्रो प्रियजनलाई पनि प्रभावित गर्छ । उसमा पनि स्वीकार गर्न सक्ने शक्तिको विकास हुनजान्छ, जसका कारण हाम्रो सम्बन्धमा मिठास आउँछ । एक अर्काप्रति समर्पण भाव पनि यही प्रेमले जगाइदिन्छ । यही शक्तिको सामु जिन्दगीका जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति पनि सामान्य भएर बिलाइदिन्छन् ।
प्रेम त्यो दैवीशक्ति हो, जसले हाम्रो हृदयको प्यास मेटाउँछ, जसका लागि सारा संसार तड्पिरहेको छ । हामीले आजैदेखि अरूलाई परिवर्तन गर्न चाहिने शक्ति उसलाई स्वीकार गर्ने कार्यमा लगाऔँ । प्रेम आफैँ हाम्रो अन्तर्मन गर्न आउँछ र हाम्रो त्यो निस्वार्थ प्रेमलाई हामी सात्विक प्रेमको दर्जा दिन सफल हुन्छौँ ।
सात्विक प्रेम प्रेमको त्यो स्थिति हो, जहाँ प्रेम, प्रेम र मात्र प्रेम हुन्छ ।
06/12/2011 - 12:53
© Nepal Hypnosis Pvt. Ltd. All Rights Reserved. | www.nepalhypnosis.com | mailhypnosis@gmail.com